Ahoana ny fanovana ny boaty Gmail amin'ny Android | Androidsis
Gmail no fampiharana mailaka malaza indrindra inona ny Android androany. Na dia nisy aza safidy hafa nipoitra rehefa ela. Ao amin'ny kinova ho an'ny telefaona, ny inbox dia aseho amin'ny fomba iray. Na dia manana fahafaha-manao fanovana foana aza ireo mpampiasa amin'io lafiny io.
Izany dia ahafahan'ny mpampiasa mampiasa farito ny fomba tian'izy ireo hiseho ny boaty fampidirana amin'ny Gmail amin'ny findainao Android. Fanovana izay tena mora tanterahina, satria dingana roa ihany no azo atao amin'ny fitaovana.
Ao anatin'ny rindrambaiko Gmail amin'ny telefaona, tsy maintsy manokatra ny menio lafiny iray ianao. Ity dia zavatra tratra amin'ny fipihana ireo tsipika marindrano telo eo amin'ny ilany havia ambony amin'ny efijery. Safidy maromaro no hiseho avy eo. Tsy maintsy mandeha any amin'ny toerana misy anao ianao, izay iray amin'ireo farany.
Rehefa miditra amin'ireto toe-javatra ireto ianao dia misy safidy maromaro omena (fanovana ankapobeny, fananganana kaonty na ny anaran'ny kaonty mailakao). Amin'ity tranga ity dia mila tsindrio ny anaran'ny kaontinao manokana ianao. Miditra amin'ny ny kaontinao amin'ny telefaona. Eto dia tsy maintsy jerena ny fizarana faharoa.
Ity ny fizarana boaty, izay ilay fizarana voalohany dia antsoina hoe karazana inbox. Tsindrio eo izany ary misy safidy maromaro hita eo amin'ny efijery. Ny Gmail dia mamela antsika hisafidy karazana boaty inbox tadiavintsika ao amin'ilay fampiharana. Fomba iray hanamboarana azy manokana amin'ny Android. Safidintsika avy eo ilay tadiavintsika.
Raha vantany vao voafantina ny karazana boaty, azo atao izao ny mivoaka ireo fikirana ireo. Rehefa miditra Gmail indray ianao, ny boaty ho voalamina araka ny nanontanianao izy. Tsotra toy izany ny manova an'ity karazana ity amin'ny fampiharana. Azo tanterahina isaky ny tianao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fanovana ny karazana boaty inbox ao amin'ny Gmail